“Waxaan helnay saddex dalab ka yimid kooxaha waaweyn ee yurub”..xaaska Icardi oo sidaas sheegtay – Gool FM
“Waxaan helnay saddex dalab ka yimid kooxaha waaweyn ee yurub”..xaaska Icardi oo sidaas sheegtay
(Inter Milan) 22 Maajo 2018. Xaaska Mauro Icardi ee Wanda Nara ahna wakiilkiisa ayaa waxay shaacisay in weeraryahanka kooxda Inter Milan inay jiraan rabitaanka kooxo waaweyn si ay buxiyaan 110 million euros. Kaasoo ah qiimaha lagu kansali karo heshiiskiisa San Siro, si uu ugu biiro suuqa xagaaga.
Wanda Nara ayaa u sheegtay wargeyska “Football Italy” ee dalka Talyaaniga: “Kooxo badan oo waaweyn ayaa ku cadaadinaya Icardi inuu u dhaqaaqo midkood, iyagoo diyaar la ah in ay bixiyaan 110 million euros, laakiin mudnaanta koowaad waa inuu sii joogaa Inter Milan”.
“Waxaa jiri doono kulan aan la yeelan doono maamulka kooxda Inter Milan, si looga wada hadlo heshiiska Icardi, ama uu kaga tago, laakiin mudnaanta waa in la siiyaa sii joogi taanta garoonka San Siro”.
“Waxa in badan aan la diiqadeesanahay ayaa ah, hoos u dhigida muhiimada Mauro Icardi oo ay saddex kooxood waaweyn doonayaan in uu kooxdooda midkood ku biiro”.
Football Italy ayaa ku waramaya in kooxaha wada doonaya xidiga kooxda Inter Milan ee Mauro Icardi ay kala yihiin Paris Saint-Germain, Real Madrid, Chelsea and Bayern Munich.
Raphael Varane oo eeganaya in kulanka Liverpool ay ka sameeyaan taariikh cusub